Mukhtaar Roobow oo ballan qaaday inuu aqbali doono haddii looga guuleysto doorashada… – Hagaag.com
Mukhtaar Roobow oo ballan qaaday inuu aqbali doono haddii looga guuleysto doorashada…
Posted on 3 Nofeembar 2018 by Admin in National // 0 Comments
Musharax Mukhtaar Roobow Cali oo loo yaqaano Abuu Mansuur oo shalay ka hadlayay magaalada Baydhabo ayaa sheegay inuu aqbali doono haddii looga guuleysto doorashada Madaxweynaha Koonfur Galbeed oo lagu wado inay dhacdo 17-ka bishan November.
Khudbad uu u jeediyay Ardayda wax ka barata Iskuulada iyo Jaamacadaha ku yaal Baydhabo ayuu u balan-qaaday in haddii xilka ku guuleysto uu xoojin doono aqoonta iyo waxbarashada deegaanada Koonfur Galbeed.
Waxaa uu sheegay inuu dagaal ku qaadi doono cadawga oo uga jeeday Al-Shabaab, isagoo ka codsaday shacabka Koonfur Galbeed inay ku garab siiyaan sidii cadawga ku soo duulay ay isaga difaaci doonaan qori.
“Hadaan guuleysano waxaan dhihi doonaa Yaa Qori ku difaacaya cadawga ku soo duulay shacabka Koonfur Galbeed, yaa qalin ku difaaci doono yaa qorshe ku difaaci doona, haddii aan intaas isku raacno waxaa heli doonaa Amni iyo Cadaalad”ayuu yiri Mukhtaar Roobow.
“Haddii aanan ku guuleysanin Madaxtinimada Koonfur Galbeed oo uu yimaado mid danta dalka iyo Diinta noo wada, waan garab istaagi doonaa, ma dhihi doono Yaasiin aan aniga ku jirin Aqbal ma ahan”ayuu yiri Mukhtaar Roobow.
Mukhtaar Roobow Abuu Mansuur oo soo noqday hoggaamiye kuxigeenka Al-Shabaab ayaa magaalada Baydhabo ka wada olole doorasho uu ku doonayo sidii uu ugu guuleysan lahaa xilka Madaxweynaha Koonfur Galbeed.